5 Imibono eyiphutha Yokumaketha Neqiniso | Martech Zone
Sisebenzela isiphakamiso khona manje lapho ithemba lithe bafuna ukukwenza hamba ngokushesha. Abathengisi abaningi bangaconsa amathe ngethuba lokuthola isiginesha esheshayo, kepha manje ngiyibuka njengesibonakaliso sesixwayiso. Ukuhamba ngokushesha ngokujwayelekile kuholela ekulindeni kokuthola imikhondo ngokushesha. Yize lokho kungenzeka kuze kube siyihlaziya kahle iklayenti, umncintiswano, nethuba, asiqiniseki ukuthi singayithola ngokushesha kangakanani imiphumela.
Ingabe ukungaqondi kahle? Umbono oyiphutha? Noma mhlawumbe kuphuthelwe okulindelwe. Mhlawumbe kuyinhlanganisela yakho konke lokhu okungenhla, kepha ukumaketha kunezinselelo ezinhle kakhulu. Kwesinye isikhathi ngicabanga ukuthi siyiletha kithi ngoba sithambekele ekutholeni imiphumela engacabangeki kunoma iyiphi indawo yesikhulumi, indawo emaphakathi noma ejensi.
Siyabonga okuhle ngabantu abanjengo I-Highspot eziqaphela izinganekwane eziningi laphaya. Bakhiphe le infographic enemibono emi-5, iqiniso kanye namathiphu wokuthuthukisa impumelelo ngayinye:
Reality - 65% wokuqukethwe okudalwe ukumaketha kunjalo ayikaze isetshenziswe ngokuthengisa.
Reality - Ngaphansi kuka-10% wesabelomali sokumaketha siya emizameni yokuthi khiqiza imiphumela yokuthengisa.
Reality - Zingama-24% kuphela izinkampani esezenze zaba semthethweni ukumaketha ekuthengiseni izikhwama.
Reality - Amathuluzi angakwazi yenze nzima inqubo yakho yokuthengisa futhi uchithe isabelomali sakho.
Reality - 28% wokuqukethwe kunjalo akakaze atholakale futhi ukuthengisa kuchitha ama-31% wesikhathi sabo bekufuna!
Qiniseka ukuthi usebenzisa izeluleko ezinikezwa yi-Highspot ku-infographic yazo:
The I-Highspot ipulatifomu yokunika amandla yokuthengisa ixhuma amaqembu okuthengisa kokuqukethwe okuhambisana kakhulu nesimo ngasinye, inikezela ngezindlela eziguquguqukayo zokwethula okuqukethwe kumakhasimende, futhi ihambise ukubonakala kwesikhathi sangempela kokuthi ngabe amakhasimende akuthola yini okuqukethwe kuhlanganyela. Kuthuthukile analytics inikeza ukuqonda okwenzekayo ukuze izingqimba nokuqukethwe kungenziwa ngcono.
Tags: ukumaketha nokuthengisaumbonoukuqonda kuqhathaniswa neqinisoumbono vs iqinisoengokoqoboukuthengisa nokumakethaukuqondanisa kokuthengisa nokumakethaokuqukethwe kokuthengisa
I-DivvyHQ: Ukuhlelwa kokuqukethwe kokuqukethwe kwevolumu ephezulu nokuhamba komsebenzi